Tartamayaashaadu waxay ku shaqeynayaan Istaraatiijiyada IoT ee ku aasi doonta | Martech Zone
Talaado, Febraayo 27, 2018 Talaado, Febraayo 27, 2018 Douglas Karr
Tirada qalabka ku xiran internetka ee ku jira gurigeyga iyo xafiiskeyga ayaa sii kordhaya bil kasta. Dhammaan walxaha aan hadda haysano waxay leeyihiin ujeedo si caddaalad ah u muuqata - sida kontaroolada iftiinka, amarrada codka, iyo heerkulbeegyada barnaamijka lagu baran karo. Si kastaba ha noqotee, sii socoshada yareynta tikniyoolajiyadda iyo isku xirnaantooda waxay keeneysaa carqaladeyn ganacsi sida aan horay u arag.
Dhawaan, waxaa la ii soo diray nuqul ka mid ah Internetka Waxyaabaha: Digitize or Die: U beddelo ururkaaga. Isku duub isbeddelka dijitaalka ah. Kaga sara mar tartanka, buug uu qoray Nicolas Windpassinger. Nicolas waa Madaxweyne kuxigeenka Caalamka ee Barnaamijka Iskaashatada Schneider Electric ee EcoXpert., oo hadafkeedu yahay isku xirka teknoolojiyadda iyo khibradda shirkadaha bixiya tikniyoolajiyadda adduunka, hormarinta mustaqbalka dhismayaasha caqliga badan iyo Internet of Waxyaabaha, iyo gaarsiinta adeegyo xariif ah, isku dhafan oo wax ku ool ah iyo xalalka macaamiisha.
Maaddaama buuggan waxtar leh uu sharraxayo, adduunka jir ahaaneed waa la dhaqaaqayaa - wuxuu noqonayaa mid caqli badan oo isku xiran. Xaqiiqdii, jawaabtu waa barta bilowga safarkaaga: waxbarashada. Akhri wax ku saabsan Blockchain iyo Sirdoonka Artifishalka maadaama ay badalayaan adduunka. Talaabadaada xigta runti waa dhowr bog oo horay u socda; u jeedi iyaga inay fahmaan sharciyada IoT ee ciyaarta oo ay bartaan sida loogu isticmaalo waxtarkaaga. Don Tapscott, Qoraa Wikinomics
Nicolas kuma hadlayo kaliya fursadda IoT, wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa sida celceliska ganacsiga ee aan lahayn gees farsamo loogu beddeli karo xeelado IoT ah. Dhamaanteen waan ka wada akhrisanay caafimaadka, otomaatiga guriga, iyo aaladaha tamarta… laakiin ka waran waxyaalaha aadan waligaa ka fikiri doonin. Waa kuwan tusaalayaal aan helay:
Shaxda Smart Panasonic
Way adag tahay in la aamino inaad miiska u adeegan doonto mustaqbalka waa awoodaha IoT… laakiin ka dib markaad daawato fiidiyowgaan, waad beddeli doontaa maskaxdaada.
Barkinta Smart ZEEQ
Kumaa qiyaasi lahaa barkin isku xiran - oo leh qalabka hadalka ee 'Bluetooth', kormeerka khuurada, iyo falanqaynta hurdada. Waa hagaag, waa halkan…
Dareemayaasha Production Beer
Haddii aad tahay khamri cabe, sidee baad sifiican ula socon kartaa hawsha qamriga si loo hubiyo joogtaynta iyo xakamaynta?
Xaqiiqdu waxay tahay in IoT ay noqon doonto meel walba oo leh wax soo saar kasta iyo adeeg kasta mustaqbalka. Nikolas'Buuggu waa naqshad loogu talagalay shirkadaha inay dib u eegaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda si loo go'aamiyo sida maalgashiga IoT hal-abuurka ahi u beddeli doono ganacsigooda. Wax walbana waxay ka bilaabmaan macmiilkaaga.
Digitise ama dhin waxaa adeegsada kuwa sameeya go'aanka ganacsiga safka hore si ay u dijitaaraan istaraatiijiyadooda, faylalka, qaabka ganacsiga, iyo abaabulkooda. Buugani wuxuu sharraxayaa waxa uu yahay 'IoT', saamaynta uu ku yeelanayo iyo cawaaqibka uu leeyahay, iyo sidoo kale sida looga faa'iideysto isbeddelka dijitaalka ah ee loogu talagalay faa'iidadaada. Buugga gudihiisa, waxaad ku baran doontaa:
Maxay IoT uga dhigan tahay dhammaan ganacsiyada
Maxay IoT iyo kacaanka dijitaalka ahi khatar ugu yihiin nuuca ganacsigaaga iyo badbaadadaada
Waxa aad u baahan tahay inaad fahamto si aad si fiican u fahamto dhibaatada
IoT⁴ Habka Istiraatiijiga ah - Afarta tallaabo ee shirkaddaadu u baahan tahay inay raacdo si wax looga beddelo howlaheeda si ay u noolaato
IoT waxay carqaladeyn doontaa dhammaan ganacsiyada, hoggaamiyeyaashooda oo ay ku jiraan, waxaadna si buuxda uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan si aad uga faa'iideysato. IoT waxay horay u badaleysaa suuqyo iyo shirkado badan. Macno u yeelashada isbeddeladan, iyo tan ka sii muhiimsan, fahamka sida looga faa'iideysan karo si ay uga koraan madaxa iyo garbaha ka sareysa tartankaaga waa mid ka mid ah ujeeddooyinka buuggan.
Iibso Buugga - Digitize or Die
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha kuxiran Amazon ee boostadan.
Tags: isbedelka dhijitaalka ahdigitise ama dhinHa tapscottinternet ee waxiotNicolas WindpassingerBarnaamijka Iskaashatada EcoXpert ee Schneider ElectricWikinomics
Sidee Netflix u Kordhisaa Ka Qeybgalka Macaamiisha Adeegsiga Xogta Weyn